नेयमार र एमबाप्पेले पीएसजी नछाड्ने | Hamro Khelkud
मन्देकाजीलाई मनास्लुको सम्मान
श्री भगवती र पुल्चोकको बराबरी
१३ औं सागको खर्च – पोखरामै २ करोड बढी तिर्न बाँकी!
सेभिया र बार्सिलोना भिड्दै
म्यानचेस्टर सिटीलाई वेस्ट ह्यामको चुनौती
नेयमार र एमबाप्पेले पीएसजी नछाड्ने
एजेन्सी – फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का स्टार फरवार्डद्वय नेयमार र किलियन एमबाप्पेले कुनै हालतमा क्लब नछाड्ने क्लबका अध्यक्ष नासेर अल खेलाफीले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय यूईएफएको ‘फाइनान्सियल फेअर प्ले‘ (एफएफपी) को कारण दुई खेलाडीमध्ये एक जना क्लब छाड्न बाध्य हुने हल्ला चलेको थियो । तर अध्यक्ष खेलाफीले पीएसजीले कुनै नियम नतोडेको र दुवै खेलाडी क्लबमा रहने पक्का गरेका छन् । उनले यूईएफएले तोकेको नियममा रहेर नै खेलाडी अनुबन्धन प्रक्रिया चलिरहेको बताए ।
‘दुवै खेलाडी क्लबमा नै रहनेछन् । यसमा म १ सय प्रतिशत मात्र नभएर २ हजार प्रतिशत ढुक्क छु,’ उनले भने, ‘ उनीहरु दुवै पेरिस मा नै रहनेछन् । फ्रान्सका केहि संचारमध्यमले जनाएअनुसार हामीले नेयमार वा एमबाप्पेलाई बेच्नुपर्ने स्थिति छैन । दुवै यहीँ रहनेछन् ।’
ब्राजिलियन फरवार्ड नेयमार चोटका कारण अहिले ब्राजिलमा उपचाररत छन् । उनले अर्को महिना मैदानमा पुनरागमन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्का फरवार्ड एडिन्सन काभानी पनि घाइते भएको अवस्थामा एमबाप्पेले अहिले पीएसजीको आक्रमणको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनले जारी सिजन लिगमा २० गोल गर्दै एकै सिजनमा पीएसजीका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान पनि आफ्नो नाम गरेका छन् ।
लिग तालिकामा पीएसजीले १४ अंकको अग्रता लिएको छ । यसक्रममा क्लबले दोस्रो स्थानको लिलभन्दा २ खेल कम पनि खेलेको छ । यससँगै पीएसजीले च्याम्पियन्स लिगमा पनि म्यानचेस्टर युनाइटेडविरुद्ध पहिलो लेगमा २-० को अग्रता बनाएको छ ।
सन्दीपले पाकिस्तान सुपर लिग खेल्ने!
आहा गोल्डकपका लागि बेलायतबाट आकर्षक ट्रफी आउने
रामोसको सम्झौताबारे छलफल जारी
लेभान्टे र बिल्वाओको बराबरी